आज राजमार्गको अवस्था कस्तो ? प्रहरी प्रधान कार्यालयले दियो यस्तो जानकारी « Niatra TV
आज राजमार्गको अवस्था कस्तो ? प्रहरी प्रधान कार्यालयले दियो यस्तो जानकारी
काठमाण्डौं,असार ३० । निरन्तरको वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोले देशका विभिन्न सडकमा अवरोध पुर्‍याएको छ । बाढी तथा पहिरोका कारण मकवानपुरबाट फाखेल हुँदै काठमाण्डौ आउने तथा सिस्नेरी फर्पिङ हुँदै काठमाण्डौ आउने सडक अवरुद्ध भएको छ ।